Welcome | D Royal Dental Clinic
အကြည်‌‌ရောင်‌ အံစွပ်‌က‌လေးများကို အသုံးပြု ပီး သွားညှိကုသခြင်း (Invisalign)
Brace(စတီးကြိုး) မတပ်‌ချင်‌ဘဲ သွားညှိကုသဖို့ စဉ်‌းစား‌နေပါသလား။????????????
သွားမျက်နှာ ပြင်ပေါ်တွင်ကြွေ လွှာကပ်ခြင်း
သွား မျက်နှာ ပြင်ပေါ်တွင် ကြွေ လွှာကပ်ခြင်း ကို ခု ချိန် မှာ တော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြား ကို တကူး တက သွား ရောက်ကုသ စရာ မလို တော့ပဲ ကျွန်တော်တို့ D- Royal သွားဆေး ခန်း မှာ ကုသ မှု ခံယူ နိင်ပီး ဖြစ်ပါသည် ။
Direct Composite Veneer လေး နဲ့ Hollywood Smile or Celebrity Smile လေး ဖန်တီး ကြမယ် ။????
မိမိရှေ့သွားကျဲနေတာကို ပြု ပြင် ကုသနည်း ၄မျိုး ❤️❤️❤️❤️
(1a) လေဆာနဲ့ ကျဲနေတဲ့နေရာကို သွားဖာခြင်း၊ (1b) လေဆာနဲ့သွားမျက်နှာပြင်ကို ဆေးကပ်ခြင်း၊ (2) သွားမျက်နှာပြင်ပေါ် ကြွေလွှာကပ်ခြင်း၊ (3) ကြွေသွားစွပ်ခြင်း၊ (4) သွားညှိကုသခြင်း
လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် သွားဖြူ အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (Laser Whitening Treatment)
မိမိသွားများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝါနေလို့ လူကြားထဲ ပြုံးရယ်ဖို့ ယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေပါသလား ။
Specialist Of Our D-Royal Dental Aesthetic And Implant Center
WANT TO KNOW MORE KNOWLEDGES OF CLINIC?
လက်ရာကောင်းကောင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အသေးစိတ်ပြီးတော့ကို သေချာဂရုစိုက် ကုသပေးတဲ့ Lady Doctorချောချောလေးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နော်..ငယ်ငယ်ထဲက သွားဆေးခန်း သွားရတိုင်း ကြောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် အသက်ကြီးလာပေမယ့်လည်း၊ သွားအလှအပအတွက် ဆေးခန်းပြရတာပေမယ့်လည်း စိတ်ထဲမှာကြောက်နေတုန်း.. Doctorတွေက နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိပေးတာကြောင့် အရမ်း ease & comfort ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. အခုဆို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သွားဖြဲပြီးရယ်နိုင်သွားပါပြီလို့ ..
Wutt Hmone - Curstomer
ဆရာရောဆရာမပါ သေချာဂရုတစိုက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ရာအရမ်းကောင်းသလို လူနာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုလဲ သေချာရှင်းပြပေးပြီး ရက်ချိန်းလဲမှန်စိတ်ရှည်တဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။နောက်ဆို"သွား"နဲ့ပတ်သက်ရင်D Royal ကိုလာခဲ့ပါလို့ မိတ်ဆွေအားလုံးကိုrecommendပေးတယ်နော်..
Amon Phyo Maung - Curstomer
🌟Team work လေးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ဆရာ ဆရာမတို့ ဆေးခန်းကို အရမ်းသဘောကျတယ်...😍😍 🌟 သန့်ရှင်းပြီး စနစ်ကျတဲ့အပြင် လူနာအပေါ် ရင်းနှီးပြီး နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှုလည်း ရှိတယ်...😍😍 🌟D Royal Dental Clinic...ဆေးခန်းကြီး ဒီ့ထက်ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ🌟
Khin Lay Myint - Curstomer
Aye Thet Khine - Curstomer